သရဲနီတို့ ချန်ပီယံလိဂ် အဖွင့်လှသွားခဲ့ကြတဲ့ PSG 1 -2ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေ ကောင်းပြီး ၊ ဘယ်သူတွေ ညံ့ခဲ့ ကြသလဲ ?? - SPORTS MYANMAR
သရဲနီတို့ ချန်ပီယံလိဂ် အဖွင့်လှသွားခဲ့ကြတဲ့ PSG 1 –2ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေ ကောင်းပြီး ၊ ဘယ်သူတွေ ညံ့ခဲ့ ကြသလဲ ??
ဒါပေမယ့် ပွဲချိန် 87 မိနစ်မှာ ပေါ့ဂ်ဘာ နဲ့ ရပ်ရှ်ဖို့ တို့ရဲ့ ချိတ်ဆက် ကစားမှုက တစ်ဆင့် အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင်ဟာ ဂိုးသွင်းယူ နိုင်ခဲ့ပြီး ဆိုးလ်ရှား အတွက် ဖိအား လျော့နည်း စေမယ့် အနိုင် ရလဒ် ရယူ ပေးသွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲစဉ်မှ နှစ်ဖက် ကစားသမား တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
ဒီဂီယာ (9) MOTM
Own Goal ကို ကာကွယ် နိုင်ခွင့် မရှိခဲ့ ပါဘူး ။ ဒီမားရီးယား ၊ ကုရ်ဇာဝါ နဲ့ အမ်ဘက်ပီ တို့ရဲ့ ဂိုး ဖြစ်သွား နိုင်မယ့် ကန်ချက် တွေကို ဟန့်တား ပြရင်း နိုင်ပွဲ ရရှိရေး မှာ အဓိက ကျသူ ဖြစ်နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
တွမ်ဇီဘီ ( 8 )
10 လ အတွင်း ယူနိုက်တက် အတွက် ပထမဆုံး ပွဲစဉ် ကစားခွင့် ရရှိ ခဲ့ပြီး စိတ်ချရဖွယ် ပုံစံကောင်း ပြသ သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အမ်ဘက်ပီကို ကောင်းကောင်း ဟန့်တား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အမြင့်ဘော တွေကို ကောင်းကောင်း ဦးဆောင် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အသင်းဖော် မက်ဂွားယား မပါဝင် နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ပုံစံကောင်း တွေကို ပြသရင်း ဖိအားတွေ လျော့ချ သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ရှော (7)
ခံစစ် အသားပေး ကစားဖို့ ညွှန်ကြားခံခဲ့ ရတဲ့ ပွဲစဉ်မှာ အလျင်းသင့် သလို တိုက်စစ် လိုက်ပါ ကစားပေး ခဲ့ပြီး မာရှယ် ရဲ့ ပင်နယ်တီ ရရှိရေးမှာ ပါဝင် ပတ်သက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဝမ် ဘစ်ဆာကာ ( 8 )
ဒီဂီယာ ပြီးရင် ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဒုတိယမြောက် အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ နေမာ နဲ့ အမ်ဘက်ပီ တို့ တစ်လှည့်စီ လာရောက် ကစားခဲ့ ကြတဲ့ တောင်ပံ ခံစစ်နေရာမှာ ပုံစံကောင်း ပြသ သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဖရက်ဒ် ( 7.5 )
ယူနိုက်တက် အသင်းဖက်မှ လုပ်အား အကောင်းဆုံး ကစား သမား ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဘောလုံး ဖြတ်တောက်မှု တွေကို လုပ်ဆောင်ရင်း PSG အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ဆင်ခွင့် တွေကို ရပ်တန့် စေနိုင်ခဲ့သလို တိုက်စစ် ကိုလည်း ကူညီ ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
တော်မီနေး (7)
ဘောလုံး လုယူမှု ၊ ဖြတ်တောက်မှုတွေ ကောင်းမွန်ခဲ့ သလို ခံစစ်ပိုင်း အတော်လေး ကူညီ ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ခေါင်းတိုက် ဂိုးသွင်းခွင့် ရရှိခဲ့ပေမယ့် ကံခေခဲ့ ပါတယ် ။
တဲလက်စ် (7)
ယူနိုက်တက် အတွက် ပထမဆုံး အကြိမ် ပါဝင် ကစားပေးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာပဲ ယုံကြည် စိတ်ချဖွယ် ကောင်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တွေကို ပြသ သွားနိုင်ခဲ့ပြီး ထောင့်ကန်ဘော ကန်တာ ၊ ဖြတ်တင်ဘော ပေးတာတွေ ကောင်းခဲ့ ပါတယ် ။
ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် ( 8 )
ပင်နယ်တီမှ တစ်ဆင့် အဖွင့်ဂိုး ရယူ ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အကွက်ကျတဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့မှုတွေကို လုပ်ဆောင်ရင်း တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းတွေ ဖွင့်ပေး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
မာရှယ် ( 6.5 )
တစ်ပတ်လှည့်တဲ့ အနေအထားမှာ ပြိုင်ဖက် အသင်းရဲ့ ထိချက်ကို အခွင့်အရေး ယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဉာဏ်ကောင်းစွာပဲ ပင်နယ်တီ ရရှိ စေနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဂိုးပေါက် ခြိမ်းခြောက်မှု ညံ့ဖျင်းခဲ့သလို OG သွင်းယူ ခဲ့တဲ့ အတွက် ဗီလိန် ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ရပ်ရှ်ဖို့ (7)
ပွဲချိန်တစ်လျောက် အသင်း အတွက် ထိထိရောက်ရောက် အကျိုးပြု ပေးနိုင်ဖို့ ရုန်းကန် နေခဲ့ရတဲ့ ရပ်ရှ်ဖို့ဟာ အဖိုးတန် အနိုင်ဂိုးကို သွင်းယူ ပေးသွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ပေါ့ဂ်ဘာ ( 6.5 )
ဗန်ဒီ ဘိခ် ( – )
ဂျိမ်းစ် (- )
နာဗတ်စ် (7) ၊ ဖလော်ရန်ဇီ (6) ၊ ဒီယာလို (5) ၊ ကင်ပန်ဘီ (6) ၊ ကုရ်ဇာဝါ (6) ၊ ဒါနီလို (6) ၊ ဂူယေး (5) ၊ ဟာရဲရား (6) ၊ ဒီမားရီးယား ( 5.5 ) ၊ အမ်ဘက်ပီ (7) ၊ နေမာ ( 6.5 )
မွိုက်စ်ကင်း ( 5.5 )
ဒဂ်ဘာ ( – )
ရာဖင်ဟာ ( – )
ဆာရာဘီးယား ( – )
ဘက်ကာ ( – )